Ahoana ny fomba fanaovana charger ho an'ny ipod nano mahazatra ary hikasika - Ikkaro
firosoana >> elektronika >> Ahoana ny fomba fanaovana charger ho an'ny ipod nano mahazatra sy mikasika
Alfonso Manjarrez manome alalana anay hamoaka ny antontan-taratasinao manazava ny fomba fanaovana charger ho an'ny ipod anay avy amin'ny output USB.
Tsy manazava sy mampiseho ny sasany koa lainga izay lazaina momba ny famahana ny bateria ipod.
Paikady fametrahana ho an'ny Ipod touch
Ho an'ny Ipod nano sy kilasika tsy maintsy mandefa mari-pamantarana 1,44 V azontsika amin'ny mpizara voltatera izay noforoniny tamin'ny resistors roa isika.
Azonao atao ny mahita ny pdf ao amin'ilay fonosana.
Raha te hifandray amin'ny mpanoratra Alfonso Manjarrez ianao dia afaka manoratra anheru3@hotmail.com
Fanehoan-kevitra 4 momba ny "Ahoana no fanaovana charger ho an'ny ipod nano classic and touch"
21 Jona 2014 amin'ny 11:51 hariva
Izaho dia manana olana mitovy amin'ny circuit charger an'ny masoandro, aorian'ny fametrahana ny circuit ary mampifandray ny telefaona finday amin'ny charger, misy hafatra miseho amin'ny telefaona finday milaza fa diso ny charger ...
21 Jona 2014 amin'ny 11:54 hariva
25 septambra 2014 amin'ny 8:24 alina
Salama, ity circuit kely ity dia ampiharina amin'ny maody famandrihana, ahodino mivantana amin'ny tariby USB-ko ary ampifandraiso amin'ny charger rindrina, manana faribolana ianao mba hiasan'ny tariby hampandeha ny ipod nano ary miaraka amin'izay hampifanaraka azy amin'ny itunes mankany amin'ny pc.
Alejandro sovero pinto
23 Mey 2015 amin'ny 6:37 hariva
Misy faritra hafa ve?